Vavaka ho an'ny reny maty. ? Ary Maty | Fohy
5 Famakiana Min
Vavaka ho an'ny reny efa maty Izy io dia afaka manampy antsika hahatratra ny fampiononana ilaintsika ao anatin'ny fotoana mahatsiravina toy izao.
Ny fahaverezan'ny reny dia iray amin'ireo fanaintainana mahery vaika izay azon'ny olombelona iray mahatsapa satria manary ny tenany amin'ny olona nanome aina azy, izay nitarika azy ary niaraka taminy tamin'ny fitomboany. Mampalahelo izay sarotra resena, fa miaraka amin'ny fanampiana ara-panahy asehon'ny vavaka dia mety hitranga haingana kokoa izany.
Ity dia vavaka lehibe izay, na dia mieritreritra na maniry mafy aza isika dia ny marina dia ny tsy fantatsika hoe rahoviana isika no mahatsapa hoe mila manao an'io vavaka io.
Izany no antony mahatonga ny finoana acatolika, misy fehezanteny an-tsipiriany sy marina izay ahafahantsika mampiasa izay toe-javatra iainantsika.
1 Vavaka ho an'ny reny efa maty Dia inona izany?
2 1) Vavaka ho an'ny reny maty akaiky
3 2) Vavaka ho an'ny reny efa maty
4 3) Vavaka ho an'ny reniko any an-danitra
4.1 Rahoviana aho no afaka mivavaka?
Vavaka ho an'ny reny efa maty Dia inona izany?
Ity vavaka ity dia mety manana tanjona maromaro, ny iray amin'izy ireo dia ho afaka hahita eo afovoan'ny vavaka, ny fampiononana ilaintsika, tanjona iray hafa ary angamba ny fahazoana tanjaka bebe kokoa dia ny hahafahany mametraka fifandraisana miaraka amina refy hafa, izany no manome antsika fiarovana fa ny mamy sy fitiavana amin'ny maha-reny dia ao amin'ny toerana any an-danitra, mandry am-piadanana sy mankafy ny soa avy amin'ny fananana fiainana marina eo anatrehan'Andriamanitra.
Tanjona iray hafa ny hahafahana misaotra ny fahasambarana manan-dreny ary mangataka fialan-tsasatra mandrakizay ho azy. Zava-dehibe izany satria io no fomba ahazoana mihavana amin'ny tenantsika amin'ny fahalalana fa ny vavaka ataontsika dia mahatonga ny mpianakavintsika hahita ny hazavana any ankoatra FAHAFATESANA.
1) Vavaka ho an'ny reny maty akaiky
«Jesosy Kristy Tompo, Zanak'Andriamanitra, izay te-hanana reny etỳ an-tany, dia i Maria Virjiny; zahao amin'ny masonao feno fangorahana ny mpanomponao N…, izay nantsoinao avy tany an-tratran'ny fianakavianay.
Ary amin'ny alàlan'ny fanelanelanana nataon'i Masina Maria avy any Guadalupe, dia tahio ny fitiavana izay efa nananantsika hatrizay teto an-tany, ary ataovy, avy any an-danitra, hanohy hanampy anay. Raiso eo ambany fiarovanao feno famindram-po ireo izay nilaozany teto an-tany. Ianao izay velona sy manjaka mandrakizay doria.
Matetika, ny fehezanteny ho an'ny reny efa maty kely dia tsara tarehy indrindra.
Manana modely amin'ny vavaka maro isika amin'izao fotoana izao ary, anisan'izany ny safidy marobe fehezanteny fohy izay mora tadidy ary inona no azonao atao amin'ny fotoana rehetra.
Amin'ny toe-javatra manirery, indraindray, te-ho irery isika ary handany ny ataontsika mba hahatadidy ilay olon-tiantsika, amin'ireny fotoana ireny dia zava-dehibe ny ahafahana manarina ny iray amin'ireto vavaka ireto izay tsy mitaky fotoana be loatra fa afaka manampy antsika handresy ny alahelo ary hahita ny fandriam-pahalemana sy filaminana milay tsy mety tsapiky izay anjaran'Andriamanitra ihany.
2) Vavaka ho an'ny reny efa maty
«Ry reniko, tiako ny milaza izany
Ianao no mpitarika sy avaratry ny fiainako,
Misaotra anao fa eto amin'ity tontolo ity izahay
misaotra anao izay nanome anay,
misaotra anao izay nahita anay,
Misaotra anao izahay fa iza isika,
lasa ianao, nankany an-danitra,
Nahavita ny irakao tamin'ny fiainanao ianao,
nanampy ny namanao sy ny sahirana ianao.
mandinika sy mahatsiaro ny zava-drehetra,
ny fomba hanadino ireo zavatra tsara be dia be, ny feonao, ny fihomehezanao ...
Ray ô, mangataka aminao aho ankehitriny
henoy ny fivavako
ary mihainoa ny feon'ny fivavahako,
ampianaro ny reniko ny lalana,
mba hiaraka aminao amin'ny Tompo,
Ento miala sasatra any amin'ny fanjakan'ny lanitra izy.
Ny reniko, malazo iray eo am-pasany
Ny ranomaso amin'ny fitadidianao dia mihena
vavaka ho an'ny fanahinao dia raisin'Andriamanitra.
Mamirapiratra ho azy ny hazavana maharitra mandrakizay.
Tianao ny vavaka mafy ho an'ny reny efa maty?
Ny reny dia zavamaniry feno fitiavana sy fitiavana izay hiantoka hatrany ny mahasoa ny zanany. Ohatra iray amin'ny reny fakan-tahaka dia ny renin'i Jesoa Kristy Tompontsika, feno ny Fanahy Masina nahalala ny fomba hitiavany sy hanaiky ny zanany lahy.
ny Ny reny dia ampahany lehibe amin'ny voalobon'ny olona tsirairay ary rehefa tsy mahomby ilay ampahany amin'ilay Andriamanitra mamorona, izay feno fotsiny amin'ny alàlan'ny vavaka ataontsika, miaraka amin'ny fiheverana fa izy dia eo akaikin'i Andriamanitra mikarakara ny zanany.
3) Vavaka ho an'ny reniko any an-danitra
«Raiko ô, fiononana afa-tsy amin'ny fanaintainana mandrakizay.
Misaona ny tsy fisianay anao ry reny malalanao, amin'izao fotoana mampalahelo izao,
Mamela fangirifiriana be loatra, fanaintainana be loatra, avelanao ao am-pontsika ny fahabetsahana lehibe,
Avereno izy Tompo, ny famelana ny fahotanao, handalo ny varavaran'ny fahafatesana,
Ankafizo ny fiadananao sy ny fiadananao mandrakizay.
Andriamanitra Tsitoha, Napetrakay tamin'ny tananao feno fitiavana. Ho an'ny reninay, izay nantsoina amin'ity fiainana ity mba hiaraka aminao. Omeo azy ny fitsaharana mandrakizay amin'ny fanahy any amin'ny paradisa. Reny, tiako ny milaza fa ianao no mpitari-dalana sy avaratry ny heriko,
Misaotra anao mbola eto amin'ity tontolo ity izahay, misaotra anao izay nanome anay izao fiainana izao,
Misaotra anao izay nahita anay, misaotra anao izahay fa iza izahay,
Ary misaotra anao fa olona tsara foana aho navelanao, nandeha tany an-danitra ianao,
Nahavita ny asa nanirahana anao tety an-tany ianao, nanampy ny hafa sy ny sahirana,
Mijery sy mahalala tsara ny zava-drehetra, toy ny tsy firaharahana ny zavatra mahafinaritra be dia be, ny feonao, ny fitsikinao ...
Androany Raiko, mangataka aminao amin'ny fanetren-tena lehibe aho, henoy ny fivavako
Ary henoy ny feon'ny fivavahako, asao ny reniko ny fomba,
Ho eo akaikinao Tompoko, Ento miala sasatra any amin'ny fanjakan'ny lanitra izy.
Ry Neny, malazo eo am-pasany, malazo ny fahatsiarovana anao
Vavaka ho an'ny fanahinao dia raisin'Andriamanitra izany. Enga anie ny fahazavana mandrakizay hamirapiratra ho anao, enga anie ianao handry am-piadanana.
Tena tianay io vavaka io ho an'ny reniko efa maty any an-danitra.
Ny reny dia sakaiza azonao atrehana amin'ny fotoana rehetra, na inona na inona zanaka ratsy hahatongavanao, ny reny dia misokatra malalaka handray ny zanany.
Rehefa mivory any an-danitra ireo reny ireo dia mitoetra ho feno fitiavana sy mitoetra ho vonona hihaino anay, ampio sy hitohy hitari-dalana antsika.
Rehefa azon'izay rehetra takatsika fa tsy misy toerana tsara kokoa ho an'ny reny noho ny hoe manakaiky an'i Jesosy Kristy Ray tokana.
Rahoviana aho no afaka mivavaka?
Ny vavaka dia azo atao amin'ny fotoana rehetra.
Tsy voatery hoe atsangana ny feo na alefa ny labozia, fa kosa, afaka mivavaka avy am-po isika ary enga anie ny vavaka hivavaka. Ankoatr'izay, ny hany anananao dia ny finoana velona ary mifohaza ny vavaka ataontsika ho tonga any amin'izay tokony halehany.
Ny labozia, ny toerana, raha ataontsika amin'ny feo avo sy avo na ao an-tsaintsika, dia ireo antsipiriany izay azontsika jerena amin'izao fotoana izao, fa na izany na tsy izany dia azo atao amin'ny fotoana rehetra ny vavaka.
Ataovy ity vavaka ity ho an'ny reny efa nodimandry am-pitiavana.
Vavaka ho an'i Saint Michael ilay arkanjely